I-Kirrama Lure - impelasonto evulekile yokuphunyuka - I-Airbnb
I-Kirrama Lure - impelasonto evulekile yokuphunyuka
Carruchan, Queensland, i-Australia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Noel
U-Noel Ungumbungazi ovelele
I-Kirrama-Lure iyimizuzu eyi-10 enyakatho yeCardwell. Itholakala edolobhaneni elake lasaha i-Carruchan. Le ndawo yokuhlala ebabazekayo, idizayini eyindida kanye nesakhiwo konke kwakhiwe kuworkshop ye-Hill-Billy Handcrafts. Kulala abantu abangu-5 ngezinketho zokuhlala izivakashi eziningi. Igceke elikhulu kanye nokuba seduze kweCardwell kulungele abathandi bokudoba. Imizuzu emi-5 ushayela uye endaweni enhle yehlathi (Amachibi e-Spa, i-Attie creek falls njll) kanye nemizuzu eyi-10 ukuya ebangeni lomlando laseKirrama. Izilwane ezifuywayo zamukelekile, indawo ebiyelwe ngemuva.
Indawo yokupaka eyanele yama-trailer ezikebhe, umahamba-nendlwana njll. I-Rest ilala ngokunethezeka oku-4 nombhede owodwa ogoqekayo wekamu womuntu wesi-5. Uma kukhona abaningi ephathini yakho kunezinketho zabo zokugxumeka itende, ukukhipha i-swag noma ukumisa i-campervan yabo egcekeni ngezindleko ezengeziwe ze-$ 10 umuntu ngamunye ngobusuku. Sicela uxhumane nomsingathi ukuze uthole imininingwane eyengeziwe ngalokhu.
Nethezeka ekubalekeni kwakho ngempelasonto imizuzu eyi-10 kuphela ukusuka eCardwell kanye nemizuzu emi-5 ukusuka emigodini yokubhukuda yamanzi ahlanzekile njengeCardwell Spa Pools kanye ne-Attie Creek falls.
Sihlala ngaphesheya komgwaqo futhi siyatholakala kusukela ngokungena kuya ekuphumeni kuyo yonke imibuzo yakho.
UNoel Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Carruchan namaphethelo